Wariye caan ah oo BBC ka tagay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 27 September 2015 27 September 2015
Wariye Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ka mid ahaa Wariyeyaashii in muddo ah u shaqeynayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay inuu ka ruqseystay, kadib 10-sano oo uu bahda BBC ka mid ahaa.
Macalimuu oo ah wariye ay aad u jecel yihiin warbixniadiisa Soomaali badan oo kala joogta dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa waxaa aad loogu xusuustii wararkii xasaasiga ahaa ee xilliyadii dagaaladaa cuslaa ee Muqdisho ka dhacay sanadihii 2007,2008 iyo 2009.
Mar aan wax ka weydiinay sababta uu uga tagay BBC-da ayuu sheegay inay tahay arrimo isaga u gaar, Macalimuu ayaa ka mid ahaa Wariyeyaashii aas aasay Idaacada FM-ka ee Jowhar oo aheyd idaacada kaliya ee ka howl geli jirtay magaalada Jowhar.
Wariye Maxamed Ibraahim Macalimuu oo barta facebook ee uu leeyahay ku shaaciyayay inuu BBC ka tagay ayaa qoraalkii uu soo dhigay waxaa uu ahaa sidan:-
Kheyr baan idiin dhaafay.
Nin dad shacab ah ku rasaaseeyay duleedka Jowhar o gacanta lagu dhigay